Milicsi on Cahdiga ah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Hadda waxaa jira waxba dembi miidhan ah oo ku saabsan Xoolo. Oo lagu Abaal marin shaqo adag waa wax fiican,, laakiin taasi ma noqon kartaa meesha rajadeenna been. Wealth waa in aanay noqon goolka dhamaadka our, waa inay noqdaan hab ah in dhamaadka weyn. Waxaan sidoo kale ma awoodaan in ay ku kalsoon tahay in nin uun si loo badbaadiyo maalintii.
Musharaxiinta nolosha fudud noo dhigi karo dhulka this (marka fikrado ay dhab ka shaqeeyaan), laakiinse iyagu ma ay noqon kartaa rajo kama dambaysta ah. Iyagu ma takhaluso kartaa dunida dhibaato oo dhan, ama nabad kaamil ah. Ciise oo keliya ayaa sameyn kara in. Oo wuxuu Doono.
Fadlan hana i fahmi. Tani ma aha dhiirigelin si aad u is illowsiin siyaasadda. Shakhsiyan, Waxaan qorshaynayaa in ay bixiyaan si ay u tartanka madaxtinimada dareenka dhow, oo waxaan isku dayi doonaa in la sameeyo go'aan ku saabsan, kuwaas oo ay u codeeyaan in November. Waxaan idinku boorinayaa in aad la mid ah sameeyo. Ma dhahayo ma codayn, Waxa aan dhahayo ma iibsan galay been ah.
Nolosha wanaagsan ma aha wax barwaaqo, iyo musharixiinta siyaasada ma aha mid deggan ku filan oo ay ku dul dhiso noloshaada. Nolosha wanaagsan wuu nool yahay by Ilaah rumaysta wanaagsan iyo dhismaha noloshaada isaga on.
Ya'Lisha Wooden • August 19, 2013 at 9:12 waxaan ahay • Reply
Haa ayaan gebi ahaanba hesho waxa aad u sheegeyso, maxaa yeelay, waan ogahay qof walba waxa uu si ku warameyso jariirada kor ku saabsan daawashada heshiisyada iyo maankayga i wuxuu u ekaa mid jidka u katari Ilaah waxa uu wax jidkiisa samayn…Sidoo kale dadka ay tahay in la fahmo in nin keli ahu ma jiro mas'uul ka ah dawladda. Haddii aan ka bixisay dareenka dugsiga fasalka Congress runtii waddaa dowladda iyo go'aanka dowladda sidaas oo kale aadan halmaantay siyaasadda laakiin fiiro iyo ku og tihiin qalbigiinna in Eebe yahay in ay gacanta ku…. iyo sidoo kale cilmi naftaada ku saabsan arrimaha lagu kala hadlay labada dhinac iyo sidoo kale aan ka tago iyocadhadii off waxay dhihi iyo qabaa tan iyo markii ay codadka wanaagsan, wuu wanaagsan yahay…waxaan ku khasbannahay in cilmi-baarista…waxaa nala Baray in dugsiga sabab ah (baraha mustaqbalka soo baxay me..Lol)
ChristineRs • August 19, 2013 at 9:12 waxaan ahay • Reply
HAA! Awoodda waa (ama ugu yaraan, waa in la) in gacmaha dadka, laakiin waxaan bixiyo xorriyadda dowladda kuwa oo waxaan iyaga ka dhigi go'aano naga wakiil ah…
Waxaan jeclaan lahaa inay dib u eegaan waxa u qoran tahay oo ka soo horjeeda waxa la yiri. Dadka oo ku odhan doonaa waxyaalaha durbaan ilaa dareen karaa. Waxaad ogtahay 'Koox’ waxay u taagan tahay waxa ay madal yahay. Waxay leeyihiin in ay qabtaan run in wacdiyo kuwa… sida aynu u leeyihiin in ay qabtaan run in Kitaabka Quduuska ah, Dastuurka, Bayaanka Xorriyadda, Bill of Rights, iwm. Marka saaray warqad, waa adag u galleen baabuur oo ballamo ku sameeyey intii lagu jiray waqtiga doorashada.
Pastorextreme • August 19, 2013 at 9:13 waxaan ahay • Reply
Iyada oo ku saleysan waxa Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in ku saabsan Khaniisnimada, Guurka iyo Abortion doorashada waa u fududahay!!!
Matthew Hall • August 19, 2013 at 9:14 waxaan ahay • Reply
Waan ka soo horjeedaa in doorashada u dhexeeya labada, haddii aan diiradda waa in cidhiidhi ah, waa ay fududahay. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa in ay arkaan waxa dhici lahaa haddii Nasaarada joojiyay ciyaaro midig / ciyaarta ka tagay oo wax fiiriyey si aad u aragto waxa Ilaah wuxuu ku yidhi ku saabsan arrimaha ka baxsan kuwa more cad kaliya ku xusan – xuduudaha Ilaah siiyey dawladda tusaale ahaan.
ChristineRs • August 19, 2013 at 9:14 waxaan ahay • Reply
Aan ku saabsan bidix iyo midig, fikradeyda. Haddii arrimaha weyn ma saf ugu jira, Waxaan shaki ah in kuwa ka yar cad doono… marka la eego barnaamijyada dowladda ama xukuumadda, maxaad aad dareento waa doorkooda?
Waxa ugu horeeya ee ah in la ogaado ka hor dood sidan oo kale waa in la kala dhexeeya Kaniisadda iyo State. Labadaba waxaa Ilaah amreen hay'adaha la doorar kala duwan.
In la yiri, kitaabku hadlaya, waxa ay u muuqataa ii sida haddii barnaamijyo badan in xukuumaddu ay hadda waddaa dhab ma dhici hoos timaad maamulka iyo sidoo kale niyad sida ay ku noqon karaan. Ilaah waa ka walaacsan ma aha oo kaliya la ujeedooyinkooda our laakiin falalka our. Halkan waxaa ku qoran tusaalooyin yar. Welfare, daryeelka caafimaadka, ammaanka bulshada, Medicare, oo waxaas oo dhan isagoo la sameeyo iyada oo daryeelaan dadka dhici horeeyay ee shakhsiga si ay u qaataan mas'uuliyadda isaga ama iyada is, marka labaadna in qoyska haddii qofkaasi ma karo, iyo markii saddexaadna qaar, kuwa aan haysan qoyska (agoonta iyo carmallada) si Church. Waxbarashada dhaco qoyska (beydkiisa 6) ka dibna si Church in ay Ilaah ayaa u magacaabay macalimiinta iyo wadaadada (ama reer Laawi ah ee Axdiga Hore). Dhawr tusaale.
James Stevens • August 19, 2013 at 9:15 waxaan ahay • Reply
Ah, arrimaha kubada cagta classic.
Christian • August 19, 2013 at 9:15 waxaan ahay • Reply
Laakiin Ciise kuma odhan, wuxuu ku weydiin lahaa waxa views ahaayeen on khaniisnimada, guurka, ama ilmo iska soo ridid ​​markii uu soo laabtay. Laakiinse isagu ma uu odhan uu ku weydiin lahaa haddii aad ku quudin jiray kuwii gaajaysan, qaawan, oo ku harraadeen. Sidaa darteed, taas oo ah musharaxa kula tahay badan tahay in la raaco waajibaadka kuwa…
Rmyers • August 19, 2013 at 9:15 waxaan ahay • Reply
Waxa uu ku hadlay oo aad u cad on kuwa arrimaha aad loo yareeyo! Waa in aan u malaynayaa in isaga oo kale. HAA An, WAXAAD iyo inaan dadka gaajeysan, maro qaawanna, iyo daryeelka agoonta iyo carmallada, iwm….Gaar ahaan kuwa ka tirsan qoyska oo rumaysadka….laakiinse meeshii Ciise idinku leeyahay in uu magacaabo xukuumadda loo sameeyo?? Soo rididda ilmuhu waa nolol iyo geeri…u muuqataa waxaa jira amar ku saabsan in. Guurku waa ah oo ku saabsan Masiixa iyo kiniisadda…Waa in aan mudnaanta ah mucaaradka dawladda barwaaqosooranka iyo galmada’ xiisaha is kor ku xusan in? C'mon Christian, Qofkii maankiisu samayn aad leedahay?
ChristineRs • August 19, 2013 at 9:15 waxaan ahay • Reply
Dhulku ku heshiin… Waxaa wax laga xumaado, Waxaan maqlay wadaadada qaar ka sheeganaya (warbaahinta caadiga ah) in arrimahan waa in AANAY ogaado cidda aan u codeeyaan… Cabsi ma aha?!
Tjambaya • August 19, 2013 at 9:18 waxaan ahay • Reply
Nolosha wanaagsan soo bixin waa isagoo iimaanka xagga Ilaah a Good?Waan jeclahay Trip iyo qayb jidhka ah, laakiin haddii ay tani waa version of nolosha wanaagsan ka fiirsaneysa inay saameyn ku leeyihiin waxaan u dhihi waxaan ahay niyad sababtoo ah nolosha wanaagsan ii waxaa uu xiriir aan dhabta ah la God.In erayada Ciise “Waxaan u imid inaan iyaga siiyaa nolosha iyo nolosha oo faro badan iyo Tanu waa nolosha si ay u ogaadaan kii i soo diray”.Hooba leh waxa Ciise said.And Ciise tryna soo celiyo xiriirka wixii Adam lumay ee Garden of eden oo ay ka mid booqashooyinka ka sarraysa ka ah xiriirka God.Areal wanaagsan leh Eebe u noqon dhabta ah iyo ma ahan oo keliya reading erayga iyo doonistiisa fahamka ilaa in,Its sidoo kale la xidhiidhka Ilaah iyo helaya ereyo dhab ah oo gaar ah si aad noloshaada iyo kaas oo lagu xaqiijin karo sababtoo ah wax kasta oo u ka Ilaah maqla leedahay in ay ka dhacaan life.Its dhabta ah ayaa sidoo kale lagu soo booqday by ahu sida Aadan iyo David iyo quduusiinta, kuwaas oo ku qoran oo dhan ee Testament.Its New sidoo kale ku dul socda, Ilaah iyo sida aad u aragto sida uu u shaqeeyo in aad noloshaada noloshaada heer shakhsi u bilaabaan si ay u fahmaan waxa uu u eg yahay kaas oo sidoo kale la sugi by tusaale ahaan Scripture.For Ilaah caawin kara u macquul aheyn ah Adkaan xaaladda ka dibna ilaa in u ogaan Eebe waa badbaadiye iyo in si dhab ah wax aan Ilaah kari,waana waxa waxa Kitaabka Quduuska ah waxaa loola jeedaa marka uu ku leeyahay Ilaah tusay Muuse ways.There wax badan in la yidhaahdo oo ku saabsan og Ilaah iyo waxaan haka leeyihiin waqti enuff ama boos si ay u ka soo fagid here.I ognahay peops qaar ka mid ah u malaynayaa doonaa halkaas aado kuwa Masiixiyiinta burjiga mar kale, laakiinse erayga cadeyso aan eegaysana.
Josh • August 19, 2013 at 9:19 waxaan ahay • Reply
First, Anigu ma leh in Christian a codeeyaan WAA for Romney. (akhri xukumay in si taxadar leh oo si joogta ah)
Hadda, isagoo sheegay in, sababta kaliya ee la cafin karo waayo Christian ah in ay u codeeyeen Obama waa in uu isagu / iyadu ahayd la'aataan waxa ka mid ah arrimaha iyo qofka.
moparfan54 • August 19, 2013 at 9:19 waxaan ahay • Reply
nacas Kaliya rumaysadkiisa dhigeysa in qof ka mid ah dunida inay “badbaadiyo” iyaga ka saboolnimada ama wax kale oo xanuunsan ee noloshooda, laakiin in ay iska indha xisbi in Ilaah caayaa,, iyo ku adkeyso on dilay aan waxba galabsan oo aan la iska indho tiri karin. Sidaa darteed doorashada kaliya ee macquulka ah(haddii aad Mu'min yihiin) waa musharaxa Jamhuuriga. Waxaan gelin rumaysad u lahayn in Jamhuuriga, laakiin waxaan rajo iyo salaadda in Rabbigu kaa caawin doonaa iyaga ka aragtid waddada saxda ah in la raaco.
Veronica • August 19, 2013 at 9:19 waxaan ahay • Reply
WAAN AHAY leh ha u codeeyaan. Ha u codayn haddii aanay jirin mid orodka run iyo cibaado, maxaa yeelay haddii aad, aad soo iibsatay ee beenta ah, ama aad kaliya ma Ilaah wuxuu isku halleeyaa.
Rmyers • August 19, 2013 at 9:20 waxaan ahay • Reply
Veronica, xisbiga, kuwaas oo ku guuleystay furto DOONAA siyaasadahooda. Your ficil ama ficil saamayn DOONAA natiijada. Mid ka mid ah madal kor u qasnaan, dhimasho iyo deynta in carruurta iyo anigaa iska leeyihiin in ay ku noolaadaan iyo barbaariyaan doonaa. kale wuxuu doonayaa in laga hortago iyo burburinta ay keenaan, iyo si loo ilaaliyo waxa Ilaah ii roonaaday i siiyey umadan. falalka Faith – waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee dadka kale iyo ammaanta Ilaah. laftiisa waji Gaalnimada sida dhawrsashada dadban.
Dr. Nathaniel Wilson, Sr • August 19, 2013 at 9:20 waxaan ahay • Reply
Runtii gelinaya arrintan in aragti la aragtida ah kitaabiga!!! Ilaah ha idiin barakeeyo, oo aad post naxariisi korkiisa ha laga yaabaa in kuwa ku akhri.
LAAKIIN • August 19, 2013 at 9:20 waxaan ahay • Reply
Haddii aad codayn sida uu Kitaabka Quduuska ah, badan musharax ma si buuxda u la kulmi doonaa shuruudaha aad. On xaq u jiraan dhawr dhibaatooyinka Caddaalad (socdaalka, saboolka ah, xuquuqda haweenka). On bidix waxaa jira dhibaatooyin moral (guurka gay, ilmo iska soo ridid, iwm) flash News: xukuumadda MA waa kaniisadda. Taasi waa sababta dad sodcaal ah waxay u carareen England, iyo sababta kala kaniisadda iyo dawladda waa wax fiican (eegno taariikhda Roman Catholic). Waxaan sidoo kale u baahan tahay si ay u joojiyaan sharciyeeysay our code moral. Ciise ma u dhintay sharciga ay u xukumaan qalbiyadeenna, laakiin xoriyadda inay isaga ku caabudaan ruuxa iyo runta. Haddii aan ka soo horjeeda guurka Gay waa in aan sidaa sameeyo by dunida siinta tusaalooyin badan oo guurka jinsiga ah, halkii heerka furiinka ee kor ku xusan 50 boqolkiiba. Haddii aan soo horjeeda ilmo waa in aan lacag si agoonta siin iyo ka caawin barnaamijyada bulshada oo kaa caawin kids. samaynta doonaa guurka gay Quluubta isbedel sharci-darrada ah? No. Ilmo soo rididda samaynta caawimaad sharci-darrada ah qof dumar ah oo kicin doonaa ilmaha? No. waxay ka hortagi doonaa mid ka mid dembiga ka dhaca? No. (Xusuusnow Ilmo soo rididda ka dhacay siyaabo fool xun befor sharciyeynta dhacay). Ha nagu jecel leenahay dalalka deriska ah iyo codayn garashada aan tanaasul doonaa by xulashada dadka aad u ummado.
Rmyers • August 19, 2013 at 9:21 waxaan ahay • Reply
LAAKIIN, Sababta ila halkan: ma waxaad kor u qaadi kartaa wax oo sidoo kale ka soo horjeeda ay soo horjeeda? Waa maxay sababta loo abuuro arrimo been ah? Miyaanay ahayn in aan doonaya in ay leeyihiin guurka ugu wanaagsan ee aan awoodno, jecel oo lagu maamuusayo dumarkeenniiba (ama nimankooda), iyo sidoo kale sheegeen in Ilaah si cad loo qeexay waxa guur WAA – iyo qeexidda in reebaysa ay soo horjeeda? Oo waxaa la siiyey agoonta runtii DUWAN ah in la joojiyo dilka carruurta aan waxba galabsan?? (kaabaya deriska ilmuhu xaq kaga dhigi doono dilka adiga kuu gaar ah?)
Oo waa FACT fudud in sharciyada HA xakameeyo dhaqanka – taasina waa sababta aan iyaga leeyihiin! No,ay tahay deterents ma kaamil ah, laakiin in la yidhaahdo inaannu “joojin sharciyeeysay our code moral” seego xaqiiqda ah in sharciga si hufan waa sharciga ah ee qof ee code moral. Miyaanay ahayn in aan doonayno inaan impliment sharciyada u dhigma code moral Ilaah?
War saxaafadeedka ayaa ugu xanuunsan loo arkaa in aad halkan ka dhigi waa in ay noqdaan, “Ciise ma u dhintay sharciga ay u xukumaan qalbiyadeenna, laakiin xoriyadda inay isaga ku caabudaan ruuxa iyo runta.” XAQIIQDA – our cibaadada – nolosheena sida allabaryo nool – waa in runta sida uu shaaca ka qaaday. Sidee baannu u noolaan, waxa aan ku hadlin, kor loogu qaado, oo ka soo horjeeda, waa ALL ahaan, sida runta ah (oo ay ku jiraan uu sharciga moral) – ama aan AAN isaga caabudno sida inaannu, laakiin waxaa la ekaadaan hannaankii adduunyo xun.
RUUXA – our cibaadada (nolosheenna) waa in la soo xigtay, oo xooggii, Ruuxiisa – RUUXA isla Waxa uu u bushaaraynayaa Muuminiinta wakhtiga cusboonaysiinta, RUUXA isla kii LAW dul qalbiyadeenna qoray sida uu naga sii xayawaan cusub! HAA, Ciise MA dhinto uu LAW inuu u taliyo qalbiyadeenna – in aan isaga jeclaan lahaa qalbigaaga oo dhan our, maanka, naf, iyo xoog (summation ee Law ah), iyo kor loogu qaado aqoonta isaga (sida runta ah) sida uu naftiisa u muujiyay, iyo jacaylka isaga (oo ay ku jiraan uu sharciga).
Waa maxay sababta aan waa in jalaq u siin waxa sharciyada aan loo fuliyo? Waa maxay sababta aan u dhaqmaan sidii dhimashada waa sida ugu fiican ee nolosha? Tani ma aha sida uu Ruuxa si – laakiin kale. Tani ma aha sida uu xaqa.
Charliemuldrow • August 19, 2013 at 9:21 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay this. Waxaan u codayn sida uu hadalka. Ma aanan fiiriyeen kuna aadan at musharixiinta waxaan eegi adag at madal. Haddii madal ayaa stances in lid ku ah hadalka, markaas musharax aan la qaadan oo aan cod. Anigu ma taageeri doonaa xisbiga ah oo siyaasadaha iyo mabaadiida yihiin si cad ka gees ah Ilaah aan u adeego. My trust ma aha in nin midna xisbi siyaasadeed; waa in Aabbahayga jannada ku jira kan i jecel,. My nolosha ku salaysan yahay keliya isaga on. Iimaankoodii hore MAR KASTA!
Matthew Hall • August 19, 2013 at 9:22 waxaan ahay • Reply
fikirrada Great Trip. anigu waxaan oggolahay. Waxaan eegi karin in madaxweynaha na ama quruunteenna badbaadiyo. Salvation yimaado helo rumaysadka Masiixa, iyo midhaha addeecid our isaga u keeni doonaan barwaaqada in aan hadda raadinaya meel qaldan.
Maxaad u malaynaysaa ku saabsan fikradda ah taageeraya musharax sida sida aad u si fiican ay u dhigma la qaadataan Kitaabka ee ku saabsan arrimaha sida kaliya dagaallo iyo awoodda sharci ee dawladda vs in shakhsiga, qoyska, ama Kaniisadda?
ChristineRs • August 19, 2013 at 9:23 waxaan ahay • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi… in la eego musharaxiinta’ aaminsan moral iyo taageero arrimaha moral qaar jeeda dalka this, waxa kaalin Ma waxaad u rumaysatay ay ka ciyaaro doorashada musharaxa in ay u codeeyaan?
Emmanuel • August 19, 2013 at 9:23 waxaan ahay • Reply
Ma waxaan ka filayaa Trip si toos ah uga jawaabaan su'aalahaaga, laakiin waxaan qaadan kartaa crack a waxa at haddii aad rabto.
Aniga aragtidayda, inaan xoogaa aan bakhtiistay. Sida Christian a, Waxaan doonayaa in ay u codeeyaan saaxiibka ugu fiican ee Church, kuwaas oo arki doontaa in baahida our waxaa ka hadlay si kor loogu qaado bulshada iyo soo celinta dareen qaar ka mid ah iftiin qaranka. Waxyaabaha sida ilmo iska soo ridid ​​halis u ah dalka, laakiin ma dhihi karo in joogitaanka ilmo iska soo ridid ​​Isguursadaan soo dejinaysaa cadhada Ilaah. Haddii tani ay bulshada u qummanaado in marka laga reebo ugu weyn, Waxaan filayaa Ilaah ka dooni lahaa in, noo naxariiso ku wajahan iyo wargeeyayaal u dirnee inaad nala soo dhaadhiciyo inay iska daayaan dembigan. Taas oo uu sheegay, doorashada ee ka mid ah siyaasi kale si uu u dhaqan isbedel in ka badan waa in aanay noqon sabab ka mid ah in ay codeeyaan iyaga u. Inta badan waxaan arki ilmo iska soo ridid ​​iyo guurka gay sida xoojiyo in ay dadku u isticmaalaan in ay kugu qasbi in ay u codeeyaan ama musharax, kuwaas oo, intaad Waantoobaysaan, laga yaabaa in aanay xitaa waxay leeyihiin heshiis weyn oo raadayn siyaasada in (ama waxaa laga yaabaa in wax weyn uu ku saxan). Waxaan kaliya ma doonayaan in loo cagajugleeyo sida isagoo Masiixi ah oo wuxuu galay xulashada mid ka mid ah murashaxiinta ee arrinta hal, Ilaah la isticmaalayo sida nooc ka mid ah dubbe. Xaqiiqada ah ee arrinta waa la garan mayno waxa Eebe ku samayn doono hal qof ama quruun qudha iyada oo sababtu tahay ilmo iska soo ridid. Waxaan kaliya ma oga.
Isla tagaa, waayo, khaniisnimada iyo guurka gay. khaniisnimada Waxaan ahay, laakiin Anigu waxba ma aan sii socotay inay u essentialize sidii dembi bay u tahay kuwa ugu liita dunida oo dhan. (Maxaa ku saabsan sinaysan kala jinsiga ah ama sinada? ama kufsi?) Ma cisaynayo oo ay Ilaah u? No. Laakiin waxa saamayn ayaan leeyahay oo dhinaca kale in ka badan si uu u dhaqan nooc ka mid ah isbedel dusha dhaqanka? Ma Ilaah si lama filaan ah ay noqon faraxsan in, sida haddii ay ahayd isbedel qalbiga? No. On top of in, tani waa America, iyo inaynu dhammaan u leedahay inaad doorato waxa aan doonayaa in aan sameeyo leh nolosheenna. In nuxurka, go`nayd Mareykanka waa in in mid ka mid ah ku samayn kartaa wax kasta oo ay doonayaan, inta ay ha u wiiqaysaa xuquuqda qof kale. Sidaas qofka gay samayn karo waxa ay doonayaan, inta ay hana i joojiyo ka noloshayda ku nool. Arrin kale oo la codbixinta ku salaysan waajibaad diineed waa fasiraadda: Maxaa dhacaya haddii siyaasi loo doortay iyagoo waajibkooda uu ahaa inay soo saaraya “Qorniinka” sharciyada, oo uu si qalad ah iyaga ahi? Tani ayaa la isku dayay in ka hor in Europe, oo waxaan u malaynayaa in aynu wada ognahay sida xun u baxay. nooc kasta oo Jideynta dowladda, haddii sababo diimeed ama cilmaani, aad istaago ka samaynayaan wixii aad rabto in aad. Haddii waxa aad rabto in aad halis u tahay qof kale, ma aad samayn karto. Laakiin haddii ay xukuumaddu meel aad u fog tagaa, waxaa laga yaabaa in aad joojiso wax aad rabto in aad qabanayso ama aad u baahan tahay inaad samayso qalbi wanaagsan. Qaado wacdinta ee Boqortooyada Roomaanka. Tan iyo markii boqor isaga qudhiisa ku arkay sidii Rabbigu oo dalbaday in cibaadada, wacdiyaya Ciise waa Rabbi helay aad dilay. Laakiin aad rabtay oo loo baahan yahay si ay u sameeyaan. kabaha ayaa ku cagta kale.
Ugu dambayn, hoosaad u ogolaanaya in aad go'aansato in aad Ilaah raaci on your wada qalbi ah u gaar ah. Waxaa fureysaa albaabka waayo, Ilaah in ay si xor ah u shaqeeyaan oo aad qalbiga, maxaa yeelay, falalka aragba aan la lagaaga baahan yahay inaad of. Laakiin marka falalka ka muuqataana, waxaa dalbaday, aad si fudud u qaadan doonaa waxqabadka falalka kuwa calaamad ammaan oo been ah. Tusaale ahaan, badan oo aan bulshada qabaa inay Ilaah samaynayaan raalli ah by muujinaya kor kiniisadda, ama in ay imaanshaha joogta ah loola jeedaa ay u socdaan in Jannada. dareen ammaan oo been ah. Oo sidaas daraaddeed ii sida wacdiye inuu u sheego, ma ay joogaan in Ark Ilaah ku salaysan kuwii sababo keligiis, ay aad u daafac. Waa sida haddii ay ahaayeen wanaagsan ka baxsan kaniisadda, oo waxba, halkii isagoo gudaha kaniisadda iyo fikirka ay u ogaadaan wax walba oo.
Taasi waa iga qaaddid oo ku saabsan cod sidii Christian American ah. Waxaan u baahanahay inaan idin siiyo xoriyadda inuu sameeyo go'aano kuu gaar ah (iyo haddii loo baahdo, xanuunsado iyaga u), iyo shakhsi ahaan u shaqeeyaan si ay u gaaraan baxay in aad inaan idin baro Masiix, kuwaas oo aad u beddeli doonaa ka gudaha-baxay. Laakiin siyaasiyiinta ma awoodi doonaan in ay sameeyaan bulshada waxa aan awoodno sida Church xoog leh. Sidaas daraaddeed waxaan u waydiisan maayo in uu noqdo wadaad iyo madaxweynaha, kaliya waxaan iyaga u weydiin doonaa in uu noqdo madaxweynaha oo aan ka heli in aan hab. (Oo haddii aad u malaynayso oo ku saabsan, aadan rabin in qof kasta oo aad jidka wax kasta oo aad samayn nolosha, ruuxiga ah ama cilmaani ah.)
theknowledgecorner • August 19, 2013 at 9:24 waxaan ahay • Reply
Ma ahan oo ku saabsan musharixiinta moral aaminsan yahay, laakiin ku saabsan arimaha kuwa ay madal in wax looga qabto our moral aaminsan yahay sidii carruurtii Ilaah. madal waxaa waxa ay noqon doontaa Xoojiya ku saabsan sharciyada, siyaasadaha, iwm. Musharaxa A bedeli kartaa ama taageeraan fikirka gaar ah oo kaliya in ay helaan cod iyo caan; si kastaba ha ahaatee in aanu qeexin sida dalka loo ordo. Fiiri maamulka hadda jira- uu bedelay “aaminsan yihiin” markii dhawr kuwaas oo qaar badan “gadhwadeen” beegantay hir of opinion caanka ah. Si kastaba ha ahaatee, madal ay wax ka beddeli mayso oo durba madaxyo simanna opinion dadweynaha. Xisbiga Libaraalka doodo boosteejo ah oo deeqsi ah- iyadoo aan loo eegin iyaga u gaar ah ay aaminsan yihiin. Isla konserfatifku. Ka sokow, sida ay mar horeba laga xusay, Madaxweynaha waa madaxa tiradaasi markan a. Congress oo ay gacanta ku hodanka ah ee dalka. Waxaan u baahan nahay inuu ku tukado, oo Ilaah u raadisid sida meesha our cod tagaa. Ilaah jirsado madaxa “Boqor” jihada uu u doonayo inuu baxo,; Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahan nahay si loo hubiyo in cod ma taageeri kuwa siyaasadaha lid ku ah hadalka. Kaliya Ilaah waa isku hallayn karo.
CherishJesusLuv • August 20, 2013 at 6:29 waxaan ahay • Reply
Waxaan dareemayaa sida, waa Ilaah kan qoray HIS-Tory….hehe….Sidaas daraaddeed wuxuu Aline doonaa wax si ay u tagaan sida uu sheegay in in Qorniinku. Waxaan qabaa kanna waa opinion in Ilaah xitaa haddii aan u codeeyaan musharaxa fiican weli istaagi doonaa sida runta iyo dhammaadka kaliya u iman doontaa sida uu sheegtay in ay Doono.
Waxaan mar walba ka heli si xanaaqsan la wacyigaliyo barwaaqo sharkii ay rujin galay “waxaa lacag.”….waxaan idinku leeyahay, “lacag Its Ilaah.”
Maxaa ka dhigay ME RABTO qayladu waa marka aan arko carmallada u dhimanayaan, saboolka caruurta gaajoonaya, iyo dadka naafada ah waxaa……Warkani iyaga kuma jiro, waayo,? Nope tahay kuwaad waa ka gees ah Ilaah iyo rabto dhegahooda wax in la tickled si ay ku faani karo oo ah “ay” maal. Ayaan ku weyddiistay Ilaah ku saabsan wacyigaliyo sida. Oo Ilaah wuxuu ii jawaabay oo wuxuu ku yidhi, “Xumme Tanuna waa ducadii oo dhan waxay weligood yeelan doonaan, ha ku faano BMW ayaa dadkii badnaa ka mid ah carruurta aan kuwa gaajaysan, waxay ku waarin maayo noolaan doonaa ila iyo tani waxay noqon doontaa waxay weligood heli doonaa oo dhan.” Sidaas dib markii uu ii sheegay in aan ka xumahay, waayo, wacyigaliyo barwaaqo, kuwaas oo…..Maxaa yeelay, BMW ama Bentley waa ALL Waxa uu sheegay in ay helayso…..
Waxaan dhinaca kale jeclaada INJIILKA iyo ogahay, taasu waa daciif ah, dhimanaya iyo saboolka ah iyo waxba kuma laha lacag. Taasi waa waaxda Ilaah. Waxa uu sheegay in wuxuu ku dari doonaa waxyaabaha aan “u baahan tahay.”
Waxaan la gaajaysan oo la taagan line sugaya cunto, wuxuu maqlay nin nagu yidhaahdaan, “Haddii aad rumeysan yahay in Ciise la iniin khardal ah ee iimaanka aad lahayd oo dhan halkan baabuur Bentley a a.” jeestay caloosha my…
Taasi waa marka aan Ilaah weydiiyay dadka sida ninkan oo kale wacyigaliyo barwaaqo. Sidoo Ha noo xusuusataan wixii CIISE leeyahay oo ku saabsan wax…
Mat 25:40	“Markaasaa Boqorkii u jawaabi doonaa oo waxaad ku tidhaahdaa, 'Hubaal dabaday, Waxaan idinku leeyahay,, maxaa yeelay sidii aad ku samaysay [waxaa] in mid ka mid ah ugu yaraan mid ah walaalahaygan u My, wixii aad ku samaysay [waxaa] Ii.’
CherishJesusLuv • August 20, 2013 at 7:00 waxaan ahay • Reply
Mat 6:19-21	“Ha ku kaydso Maal dhulka, meesha aboorka iyo miridhku ku baabbi'iyaan, iyo meesha tuugaggu jebiyaan oo ka xadaan in;”laakiin dubta, oo wixii maal jannada ku, meesha aboorka iyo miridhku ayan ku baabbi'in iyo meesha tuugaggu ayan jebin oo ayan ka xadin. “Waayo, meesha maalkaagu ku jiro, meeshaasaa qalbigaaguna ku jiri doonaa.